ओली अनुपस्थित मञ्चमा प्रचण्डको भावुक भाषण (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौँ । आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भावुक सँगसँगै उत्तेजित प्रस्तुत भए।
उनले तत्कालीन एमालेका नेताहरूलाई लाइन लगाएर प्रधानमन्त्री बनाएको जस लिन खोजे। तर आफ्नो योगदानलाई नजरअन्दाज गरिएको प्रति प्रचण्ड बेखुस देखिए।
मञ्चमा अर्क अध्यक्ष केपी ओली बाहेकका नेकपाका शीर्ष नेता थिए –माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित अन्य..। प्रचण्डले मञ्चमा नेता देखाउँदै एकएक गरेर एमाले नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको बताए। त्यो क्षण हेर्न लायक थियो, हेर्नुस् तल भिडियोमा।
तत्कालीन एमालेको युवा सङ्गठन युवासङ्घ नेपालको २९ औं स्थापना दिवसमा प्रचण्ड प्रमुख अतिथि थिए।
ओली अनुपस्थित मञ्चमा भावुक र आवेगमा यसरी प्रस्तुत भएका थिए प्रचण्ड, हेर्नुस् भिडियोः